Malunga nathi - Huiyuweiye (Beijing) Fluid Equipment Co., Ltd.
IHyuweiy (Beijing) Fluid Equipment Co., Ltd yinkampani yesebe eBeijing Huiyuweiye International Engineering Co, Ltd. (http://www.bjhuiyuguoji.com/index.html)
Yinkampani yobuchwephesha obuphezulu evelisa izixhobo ezinamanzi, uphando oludibeneyo lwezixhobo kunye nophuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo enye, kunye neqela lezobuchwephesha elinamandla, inkqubo yemveliso ebalaseleyo, umgangatho wemveliso ogqwesileyo, inkonzo ekhawulezayo yokubonelela, ukunika abasebenzisi uluhlu olupheleleyo izisombululo fluid. Sisebenzisana neeyunivesithi ezininzi ukuseka ubudlelwane bophuhliso lwexesha elide. Iimveliso zethu ezisetyenziswa ngokubanzi kwiilebhu zophando kunye nemveliso mveliso kunye nezinye iinkalo. Sinobunjineli bobuchwephesha bobuchwephesha, injineli yombane, iinjineli ze-OEM, kunye nentengiso yobungcali kwaye emva kweqela lenkonzo yokuthengisa, kwasekwa ingcali, ulutsha, ukufuna iqela eligqibeleleyo.
Iziseko inkampani yethu kwiYunivesithi yeSayensi neThekhnoloji Beijing, Harbin Institute of Technology, Hebei University of Technology, Hebei United University kunye nezinye iiyunivesithi kunye neekholeji, exhomekeke inzuzo yayo olomeleleyo iitalente zobugcisa, wazisa inzululwazi nobuchwepheshe obuphambili kumazwe angaphandle waza waqalisa ukuba sebenza kushishino lwezixhobo ezichanekileyo zolwelo. umgca wethu wemveliso uqulethe ipompo yeperistaltic, impompo yesirinji yelebhu, impompo yesirinji yoshishino, impompo yeplunger kunye nempompo yeOEM ngokweemfuno ezithile zomthengi. Kude kube ngoku sinemveliso engaphezulu kwama-40 yemodeli ezingama-360. Iimveliso ziye zavavanywa liziko lobungcali, bafikelela kwinqanaba eliphezulu lehlabathi.
Kule minyaka idlulileyo, ubunkokheli beenkampani bezisoloko zibambelele kumgaqo "wesayensi kunye netekhnoloji", iphonononga indlela eyahlukeneyo kunye nophuhliso oluzinzileyo.
Imowudi yolawulo oluphambili sisixhobo sokukhula sikaHuiyu. ubuchule obugqwesileyo yiseyile yophuhliso lukaHuiyu, Ukudibana nokuchuma kwenzululwazi kunye nophuhliso lwetekhnoloji, uHuiyu kufuneka akwazi ukuhamba ngomkhumbi. Ufuna ukuba ngowokuqala.